shaakir mustafe carab liked a post in a topic by wanleweyn in Human resource management 17 Jan 2018
Human resource management (maamulka kheyraadka aadanaha)
Maamulka kheyraadka aadanaha waxaaweeye waa hanaan ama geedi socodka ah qorista iyo hormarinta shaqaalaha iyo waxaa kaloo ka mid ah oo ku jira sharciga shaqaalaha haga shirkadd kasta ama urur kasta wuxuu leeyahay sharci iyo kala danbeyn uu leeyahay shirkadaas ama ururkaas .
Hadii uu ku xad gudbo xeerka u yaalo ururkaas ama shirkadaas waxaa qaban doona qofkaas sharciga u dagssan shirkadaas.
Human resource management waxaa ka mid ah shaqaaleysiin dad cusub la shaqaaleysiiyo sidoo kale shaqaalaha waxay u baahanyihiin la siiyo tababar ku aadan ama quseeya shaqada markaas la rabo in loo xilsaaro
abdiaziz mahamed nuur liked a post in a topic by wanleweyn in 8da aasaas ugu wanaagsan ee aad u baahantahay in noloshaada guul ka gaartid 30 Nov 2017
Waxyaabaha aas aaska u ah waxaawaaye.
Abshir Osman Saed liked a post in a topic by wanleweyn in Sidee ku noqon karaa ganacsade guuleysta 5 Nov 2017
Wuxuu ahaa rasuulkeena naxariis iyo iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee qof ku geeleystay shaqadiisa ganacsi,maantadaan la joogo qofka ganacsadaha wuxuu noqday mid ka muuqdo bulshada inteeda kale waayo wuxuu isku moodaa dadka kale in uu ka sareeyo ma ahan hadii aad ganacsade tahay in aad dadka ka sareyso balse waxa aad haysatid oo lacagta ah waxaa ku siiyay alaah waa fadli dheeraad ah alaah wuxuu siiyaa qofkii uu doona midka lacagta leh qofka aan haysanin labada waa ay imtixaamanyihiin waa in ay sidaa ogaadaan.
In aad noqotid ganacsade guuleysta waxaa kaa hortaagan caqabado fara badan balse waxaad uga gudbi kartaa dadaal iyo samir waaa in aad kaashataa samirka iyo in uu ujeedkaada uu cadyahay.
Qorshaha wanaagsan waxa uu kaa caawiyaa in aad noqotid qof ganacsigiisa guuleysta sidoo kale waa in aad keentaa badeeco ka duwan midaa markaas suuqa taalo iyo in aad kula dhaqantid macaamiishaada dhaqan wanaagsan oo asluubaysan si aad usoo jiidatid macaamiisha waa furaha aad ku noqonkartid in aad ka gaartid ganacsigaada guul iyo hormar.
U istaag olole in aad qaadid ku aadan in aad u samaysid macaamiishaada qiimo dhimis ku aadan baceecada aad markaas ka ganacsatid.
Waxaa muhiim ah mar hadii aad ganacsi ku dhex jirtid in aad la socotid dibada waxa ka socda oo ku aadan dhanka ganacsiga.
Ganacsiga sidiiba wuxuu u baahanyhay in lala socda caalamka wax kusoo kordhaaya iyo waxyaabaha cusub ee kusoo kordhaca ganacsiga .
Imisa qof ayaa ku khasaartay ganacsigooda taasi oo sabab u ah la tacaamulka xun ee ay ku sameeyeen macaamiishooda waayo maacaamiisha waa muraayada ganacsiga isku day marwaliba in aad xalisid macaamiisha waxa ay ka cabanaayaan oo ku aadan wax soo saarkaada ama waxa aad ka ganacsatid si uu u jiro ama usii waaro ganacsigaada
Abdirahman Ahmed proof liked a post in a topic by wanleweyn in 7 talaabo oo lagu xalin karo isku dhaca 21 Aug 2017
Waa maxay xalinta khilaafka(what is conflict resolution )
Isku dhaca ama khilaafka waa dood,taas oo qeeb ka ah nolosha, taas oo badanaa aad uga dhacda hay,adaha,organizationska iyo dowlada.
In xal la raadiyaa xalka marwalbo taasi ayaa wanaagsan oo aan go,aan deg deg ah la qaadanin oo la raadiyaa caqabada markaas taagan qaabkii loo xalin lahaa ama caqabadaas loo afjari lahaa.
Islamarkaana loo dhex dhexaadin lahaa dadka dooda ama khilaafka u dhexeeya,khilaafka wuxuu noqon karaa mid shakhsiyadeed,mid dhaqaale,mid siyaasadeed iyo mid dareen ah.
Hadaba side ugu wanaagsan ee loo xalin karaa khilaafka
1.Waa in aad raadisaa xal loo wada dhanyahay dhamaan cida khilaafka ka dhexeeya
2.Waa in aad si saaid ah ugu shaqeysaa sidii xal waara loo heli lahaa.
3.Waa in aad hormarisaa sidii aad ku xoojin laheen qolada markaas khilaafka ka dhexeeya xiriirkooda siduu ku waari lahaa.
Xalinta khilaafka waaa in aad loo fakaraa sidii qeyb ugu noqon lahaayeen ama ugu qeyb gali lahaayeen dhamaan kooxaha khilaafka ka dhexeeya.
Waa maxay sababta loo xaliyo khilaafka?
Hadafka ugu weyn ee loo xaliyo khilaafka kooxaha u dhaxeeya waa in laga faaidaa qodobadaaan soo socda:
1.Sida badan khilaafka waxaa keena fikrado kala duwan in la kala aaminsanyahay,oo asal ahaan laga yaabo in adiga fakarkaas gaar kuu yahay,si markaas loo xaliyo khilaafkaas waxaad u baahandoontaa,in aad eegtid khilaafkaan kooxaha kasoo horjeedo,oo aragti dheer ku saabsan qof ama aragti group.
2.Si loo hubiyo xirirka aad la, leedahay kooxaha,hadii aad nabad ugala soo horjeedid iyo in kale,waxaad kordhin kartaa markaas dadka kugu dhaw dhaw dhanka bulashada.
Gogortanka guusha waa in gogosha loo haaraan sidii nabad loo sameyn lahaa.
3.Si aad u heshid xal nabadeed oo ku aadan khilaafkaan,waa in aad isticmaashaa ilo lagu kalsoonyahay,wagti,awood,sumcad wanaagsan,dhiiri gelin,in aad ka fogaatid kheeraadka lumin,oo run ahaantii laga yaabaa in aad dhigtay kheeraadka meel sokeeye.
Side loo xaliyaa isku dhaca ama khilaafka?
Waxaa jirto 7 talaabo oo sabab u ah sidii ku guuleysan lahaa wadaxaajoodka
1.Faham wax keenay isku dhaca ama khilaafka.
2.Xiriir la sameey groupyada iska soo horjeeda.
3.Raadi xal macquul ah.
4.Dooro xalka ugu wanaagsan.
5.Isticmaal dhexdhexaadiye gacan sadexaad.
6.Baar alternative kale.
7.Qiimey xaalada walaacsan,raadi farsamooyiin cusub.
1.In aad fahamtid isku dhaca ama khilaafka
Khilaafta waxaa keena ama ku yimaadaa sababo kala duwan, waxaa muhiim ah in aad si cad u ogaatid waxa keenay khilaafka,iyo interest ga ka danbeeya khilaafkaaan,hadaba waa maxay sababaha keena khilaafka.
£Waa maxay danaha gaarka ay ka leeyihiin khilaafka?
£Waa maxay sababta dhabta aan u sameyney khilaafka?
£Waa maxay saameynta waxa aan dooneyno?
£Maxaa nagala rabaa?
£Waa maxay walaaca iyo rajada ku aadan khilaafkaan?
Waxyaabaha macquulka ah ka soo bixi karo
Waa maxay nooca heshiiska aan gaarnay?
Waa maxay xisbiga seddexaad ,oo ka baxsan colaada ,laga yaabee in uu ka dhaadhicyo,mid ama labo oo naga mid ah, in heshiiska lasoo jeediyey waa mid cadaalad ah.
Waxaan ka baranay casharkaan sababaha keena khilaafka iyo qaabka loo xaliyo hadii uu khilaaf dhaca,iyo danaha gaarka ah ee ka danbeeya khilaafka,waan rajeynaynaa in ay ka faaidi doonaan casharkaan,dadkaas oo isugu jira agency,organizations,iyo nations ka.
faaisa liked a post in a topic by wanleweyn in Cilaajka ama daawada Ramadaan 4 Jun 2017
Bisha ramadaan waa bil fadli dheeraad leh waxayna u baahantahay in lagu samro soonkeeda dadka qaar waxay soomaan saacado dheeraad ah taasina waxay u baahantahay adkeysi dheeraad qofka sooman dadka kale wuxuu uga duwanyahay in uu ka reebanyahay cunista cuntada ilaa maqribka laga gaaraayo ama laga aadaamaayo.
Inta ramadaanka lagu jiro waxaa dhici karto maalmaha ugu horeyso in aad si zaaid ah u dareentid haraad ama oon iyo gaajo hadana ramaadan waxaa laga faaidaayaa ama laga helaayaa daawo fara badan sida
1.in korosraroolka hoos u dhaca
2.in hoos u dhaca miisaankaada.
3.in hab dhiig wareegaada uu wanaagsanaado
4.in jirka qofka uu wanagsanaado.
Waa qeybo ka mid ah oo aan soo qaadanay laakin waa ay fara badanyihiin bisha ramadaan caafimaad laga helo waa ay fara badanyihiin.
Waxaad arkaysaa dad badan oo ku dhahaayo ma soomi karno waan xanuunsanahay marka aad fiirisidna xanuunka ay qabaan waa xanuun lagu daaweeyo hadii uu qofkaas soomi lahaa waxaa dhici laheed in xanuunyo badan uu ka dawoowi lahaa soonku waa raxmad,danbi dhaaf iyo in naarta la iska xureeyo waxayna nasoo martaa sanadkii halmar 12 bilood ayaan habeen iyo maalin cunto la cunaayay halbil hadii aan la dulqaadanin aan lasoomin waa dhibaato u soo hooyatay masoomaha .
Soonka waxa uu ka mid yahay 5ta tiir ee islaamka hadii uu qofka ka tago uu ka tagay tiirarka islaamka mid ka mid ah oo ah tii
Abdirisak ibnu faisal liked a post in a topic by wanleweyn in waa maxay project champions 24 Feb 2017
Project champions:waa qofka ama dadka si iskooda ah u qaata xiisadaha aan caadiga ahayn in la ansaxiyo fulinta qorshaha ama jidka siyaasada barnaamijka mashruuca ama wax soosaarka.
Asiga ama ayada ayaa sida caadiga ah isku dayi doona in uu fuliyo mashruucaas ama fikrada ah iyadoo iska cabin gudaha jirinin .
Waxaa aasaasi doona ururka sidoo kale yaqaana sidii is badal lagu keeni lahaa ama is badal u done,wakiil is bedal ama koox haysata horyaal fikaradeed
ibrahim mire liked a post in a topic by wanleweyn in 11 Qodob oo lagu garan karo canugga caqliga leh. 25 Jan 2017
Side ku garan karaa canuga cagliga leh?
Cagliga waa shey Alaah weyne bixiya wuuxuna siiyaa qofkii u doona oo adoomadiisa ka mid ah ma ahan mid la iska doon dooni karo in uu Alaah uu siiyo adoomadiisa mooyaan sidoo kale ma ahan mid la soo iibsan karo.
Hadaba waxaan idin soo gudbineynaa qaababka lagu garan karo canuga caqliga leh.
1.Canuga cagliga leh waxaa lagu tilmaamaa in uu yahay qof baraarugsan xiiseeyana in uu helo marwalbo macluumaad cusub.
2.Wuxuu kala saaraa waxyaalaha xun xun waxyaalaha wan wanaagsan
3.Wuxuu ka baaraa kitaabada ama buugaagta cilmiga xidigaha iyo cilmiga naadirka ah.
4.Wuxuu jecelyahay in mar walbo la fadhiisto ama la sheekesto dadka waayo u jooga ah si uu uga helo taarikhihii lasoo dhaafay.
5.Wuxuu ilaaliyaa xiriirka u dhaxeeya waalidiintiisa iyo asxaabtiisa.
6.Wuxuu bartaa qaabka wax loo qoro ama loo akhriyo marka uu yaryahay.
7.Wuxuu marwalbo dadka weydiiyaa su,aalo dhaqameed.
8.Wuxuu wax u akhriyaa ama u qoraa qaab aan deg deg ku jirinin.
9.Wuxuu ku dadaalaa sidii uu ku gaari lahaa hamigiisa.
10.Wuxuu u janjeeraa in uu la sheekeysto dadka ka waaweyn halka caruurta kale ay jecelyihiin in ay ayaga wada sheekeystaan ama wada ciyaaraan.
11.Wuxuu ku raaxeestaa layliga fikirka ku saabsan ama baraatikada ah sidoo kale wuxuu u janjeeraa in uu barto wax cusub.
muxsin maxamed axmed liked a post in a topic by wanleweyn in waa maxay project champions 15 Jan 2017
sucaad axmed aadan liked a post in a topic by wanleweyn in 6 arimood oo aad ku yeelan karto dabeecad soo jiidasho leh 24 Dec 2016
6 arimood oo aad ku yeelan karto dabeecad soo jiidasho leh
In badan oo nolosha ka mid ah waan ka caajisnaa in aan xiriirino wanaga dhanka dadka kale,in aad yeelaatid dabeecad soo jiidasho leh waxay u baahanatahay marka hore in aad ka fiirsatid waxa aad ku halayso loomana baahna in aad isaga hadaaqtid wixi markaas afkaaga soo qabto waayo waxay kuu keeneysaa hadalada noocaas ah in ay sumcadaada hoos u dhacdo aadna yeelan weydo dabeecad aan wanagsaneen.
2.Noqo qof dagan: in aad noqotid qof dagan waxay ka mid tahay waxyaalaha ka caawin karaan in aad nqotid qof soo jiidasho leh,hana qonin qof caro badan waayo carada badan ama xanaaqa badan waxaa asal u ah sheydaan sheydaankana wanag kuuma samaeynaayo in uu wax kaa haleeyo maahanee,qofka aan caro badneed waxaa hubaal ah inuu yahay qof dabeecad leh.
4.Hadalka wanaagsan waa sadaqo: marka aad dad la hadlaysid waa in aad adeegsataa ereyo markaas ku haboon qofka aad la hadlaysid ,aad kula hadasho ereyo ku haboon islamarkaana ku qanci karo qofka aad la hadlaysid,qofka markaas uu jeclaado adiga sidaas aad ku khasbatid kalsoonida qofkaas.
5.Wax fiican ku hadal ama iska aamuus: hadalkaaada waa in uu kheer yahay marka aad hadlayso waxa aanan danbi kaasoo gaareynin ku hadal hadii aadan sheegin waxaa fiican in aad iska aamuustid sidaa ayaa fiican danbiga kaa soo gaareynin adiga sharafweyn ayay kuu tahay.
Aflixi Bar ama Baro liked a post in a topic by wanleweyn in 13 Talooyiin oo aad si deg deg ah shaqo ugu heli kartid 21 Nov 2016
Qof kasta wax barta wuxuu hadafkiisu yahay sidii shaqo u heli lahaa aqoontiisa ha ahaato mid ay doontee.
Hadana shaqada aad heshid waxay ku xirantahay in uu alaah calaf kuugu daro marka hore sidaas daraadeed hadana waxaa lagama maarmaan ah in aad raadisid shaqada adigoo u maraayo geed gaaban iyo mid dheer intaba ileyn shaqada iyada kuma soo doonanaysee waa in aad adiga raadisaa.
Hadaba baxda aflixi.com wuxuu idin soo gudbinaayaa talooyiin kuu sahli karo in aad shaqo heshid.
1.Waa in aad save gareysaa ama aad hormarisaa raadinta shaqada.
2.Dalbo shaqo kasta oo aad ka bixi kartid.
3.Ha joojinin dalbashada shaqooyiinka.
4.Waxaad u baahantahay war cover gaar ah oo ku cad waxa aad tahay.
5.Waa in aad beegsataa shaqooyiinka.
6.Waxaaad u baahatahay waaya aragnimo la xiriirta shaqada.
7.Waxaa aad ku dari kartaa in aad shaqeysid full time.
8.Qofka in uu labiskiisa ha gaajiyo waxay u suurta gelinaysaa in uu shaqo ku helo.
9.Noqo qof isku kalsoon.
10.Marna ha dhihin wax uun ku saabsan shaqo hore.
11.Waa in aad u mahadcelisaa wareysiga kadib ama interview ga.
12.Waa in aad samaysaa networking si ay kugu sahlanaato in aad heshid shaqo.
13.Waa in aad ka dhigataa reference ga askhaas bulshada magac ku leh.
hoodo bashiir liked a post in a topic by wanleweyn in 11 Qodob oo lagu garan karo canugga caqliga leh. 18 Nov 2016
Aflixi Bar ama Baro liked a post in a topic by wanleweyn in 11 Qodob oo lagu garan karo canugga caqliga leh. 17 Nov 2016
Ahmed qorane liked a post in a topic by wanleweyn in Qaabkee u bartaa Public Management 11 Nov 2016
Barashada public management ama maamulka guud waa program laga qaato shahaadooyiin sida bachelor,master,ama phd,taasi oo shakhsiga ka dhigeyso in uu noqdo qof professional technical isla markaana uu noqdo qof u qalma in uu qabto jagadaas.
Qofka qabanaayo jagadaan ah public management waxaa waajib ah ugu yaraan in uu haystaa bachelor degree ,ama in uu kasoo baxaa college islamarkaana haystaa warqad cadeysnaysa in uu khubrad u leeyahay.
Shakhsiga haysta shahaadada public management waxaa lagaa marmaarmaan in uu soo bartay sida soo socota:
· Strategiyadda suuqa.
· Ilaha dhaqaalaha maamulkooda.
· In aad taxliisid qarashka kaa soo galaayo canshuuraha.
· Hanaanka maamulka guud .
· Qeebaha guud ee wadahalka.
· Maamulka guud eeqorshaha iyo dhaqaalaha.
Marka la saaro diiradda ama xooga qodobada aan soo sheegnay waxaa hubaal ah in meesha kasoo baxaayo maamul guud ee wanaagsan.
Cabdulaahi qalif maxamad liked a post in a topic by wanleweyn in 7 wado oo kuu sahli karto in aad u khudbadeysid si kalsooni ah 10 Nov 2016
Marka aad dadka ka hor hadlayso ama aad u jeedineyso dad badan khubad waxaa sax ah in aad u hadashid si kalsooni ah oo aad ku kalsoonaatid nafsadaada si aad usoo jeedisid hadal la fahmi karo oo aanan ku jirin wax qal qal ah ama cabsi ah.
Hadaba Aflixi.com wuxuu idin soo gudbinaayaa 7 qodob oo kaasaacidi doona in aad u hadashid si kalsooni ah.
1.Noqo qof ku kalsoon waxa uu afkiisa kasoo baxaayo ama uu sheegaayo.
2.Qaabka aad sheekada u wadid waa mid adiga nafsad ahaantaada kaa dhigtaa mid ku dhiiri gelisa ama kor kuu qaada.
3.Waa in aad dhageysataa sida ay u hadlaayaan dadka siyaasiyiinta ama khudbadaha jeediya si aad uga heshid khibrad ku aadan qaabka khubadaha loo jeediyo.
4.Waa in aad doorataa waqti munaasib ah.
5.Waa in aad adeegsataa tusaalooyiin iyo in aad gacmaha wax ku tilmaantid.
6.Iska jir in aad ku dheereysid khubada dadka ku dhageysanaayo.
7.Noqo qof is hubo cilmigana wuxu ka mid yahay furaha kalsoonida
Bishaaro Isma liked a post in a topic by wanleweyn in 7 wado oo kuu sahli karto in aad u khudbadeysid si kalsooni ah 10 Nov 2016
umalkhair yusuf liked a post in a topic by wanleweyn in Habka ugu sahlan ee wax lagu xifdin Karo 9 Nov 2016
Habka ugu wnaagsan ee wax lagu xifdin karo waa ay badan yihiin waxan kasoo qaadanayaa qodobada ugu muhiimsan kuwaas oo kuu suurta gelin kara in aad wax ku xifdisid sida ugu sahlan waxayna kala yihiin qodobadaas:
1.In aad ku kalsoonaatid nafsadaada.
Ku kalsoonaashaha nafsadaada waxay qeyb weyn ka tahay in aad wax xifdisid ay kuu suurta gelin karta in aad dhaqso wax xifdisid waayo nafsada waxa aad ka dhaadhiciso ayun bay qaadanaysaa ka dhaadhici in aad sheygaan xifdin kartid.
2.Faham marka hore casharada inta aadan isku dayanin in aad xifdisid.
Fahamka waa muhiim in aad faham guud ka qaadatid duruusta markaas lagu siiyay si ay kuugu sahlanaato in aad si dhaqso ah ku xifdisid waayo waxa maka aad fahamsantahay ayaa suura gal ah in aad xifdisid.
3.In aad qoratid macluumaad ku saabsan in casharka uu socdo.
Waxaa muhiim ah in aad qoratid meelaha ugu muhiimsan cashirka si ay kuugu sahlanaato xifdintiisa waayo marka aad haysid meelaha ugu muhiimsan way kuu sahlantahay in aad dhaqso xifsitid.
4.In aad booska ama fadhiga badalatid.
Tusaale makaaga hore hadii aad fadhiday meel ama boos bug badan suura gal ma ahan in aad kusii xifisid waayo maskaxdaada waxaa ku furan buuq badan so waa in aad ka guurtaan meesha aad fadhiday uga guurtaan meel aan zaxmad ahayn aan buuq ahayn.
5.In aad heshid hurdo kugu filan
In aad heshid hurdo kugu filan waxaay qeyb wayn ka tahay in aad dhaqso wax ku xifdisid marka waxaa haboon in aad heshid hurdo kugu fialan.
6.In aad qaadatid cunto kugu fialan.
Waa in aad isticmashaa cuntada vitaminka ku badan waxayna kobcineynsaa wax xifdintaada
umalkhair yusuf liked a post in a topic by wanleweyn in 7 wado oo kuu sahli karto in aad u khudbadeysid si kalsooni ah 9 Nov 2016
Aflixi Bar ama Baro liked a post in a topic by wanleweyn in 7 wado oo kuu sahli karto in aad u khudbadeysid si kalsooni ah 9 Nov 2016
Aflixi Bar ama Baro liked a post in a topic by wanleweyn in waa maxay project champions 8 Nov 2016
Saara cumar liked a post in a topic by wanleweyn in 8 Qodob ee kuu sahli kara in imtixaanka si fudud aad ku diyaarin kartid. 4 Nov 2016
Marka uu qofka arday yahay waxaa uu mar walbo filan karaa imtixaan imtixaankaas oo ah sida loogu ogaado ama loo tijaabiyo wax uu markaas baranaayo maadooyiinkay rabaan ha ahaadaano ama iyo meel walbo oo aad kaga jirtid waxbarashada .
Marka laga hadlaayo imtixaanka ardayda qaar baa u haysta in uu yahay ciqaab ardayga lagu ciqaabaayo,laakin ma aha nee waxay tahay in lagu ogaanaayo ardayda sida ay u fahmeen casharada ay soo qaateen sanad dugsiyaadkaas ama semesterkaas.
Waana muhiim in uu jiro tijaabo lagu ogaanaayo aqoonta arday ay u leeyihiin waxa ay soo barteen.
Ma ahan in laga qaado imtixaanka ardayda oo kaliya heerka uu rabo haka joogo waxbarashada , ee waxaa laga qaadaa qof walbo oo shaqo doon ah si loogu ogaado aqontiisa heerka ay taagantahay.
Sidaas daraadeed imtixaan marka ay maqlaan ardayda qaar aad bay u walwalaan,qaarkooda habeenkii ayay soo jeedaan ,gaar ahaan xiliyada imtixaanaadka soo dhaw iyo inta uu socdo imtixaanka ,taasi oo ay ardayga ku keeni karto xanuuno oo uusan markiisa hore qabin sida in uu ku dhaco ardayga dhiig la,aan daal farabadan,indho xanuun iwm.
Laakin taasi sax ma ahan waxaalaga rabaa ardayga marka uu casharka soo qaataba isla habeenkii inuu sii muraajicayso oo aysan isku soo gaargaarin casharadiisa .
Hadaba waxaan idin sooo gudbinaynaa qaabka ugu haboon ee loo diyaarin karo imtixaanaadka:
1.Sii nafsadaada waqti ku filan waxbarashada.
2.Isku habeey nafsadaada boos waxbarasha
3.Sameeyso jadwal kuu gaar ah.
4.Akhri casharada imtixaanka ka hor.
5.La wadaag akhrinta casharada saaxiibadaada .
6.Qaado waqti nasasho
7.Qorshey maalinta aad imtixaanka galaysid.
8.Cab biyo badan
Waa sideed qodob oo aad ugu muhiimsan marka la diyaarinaayo imtixaanaadka ,waxayna tahay dariqa ugu wacan ee ardayga ku guuleysan karo in uu imtixaankiisa guul ka gaaro .
mohamed amin liked a post in a topic by wanleweyn in Sideen Market Competitor ka ugu adkaan karaa 2 Nov 2016
4 Qodob oo aad uga guuleysan kartid ganacsiga kula jiro tartanka suuqa.
1.Ka abuur faaido wax soo saarkaada
Farsamada ugu horeyso ee aad ku qancin kartid macaamiishaada in aad abuurtid ganacsigaada faaido adigoo faa iido raadinaaya macaamiishaadana qancinaaya,
Ma ahan in aad loss gashid adigoo markaas la tartamaayo groupyada aad isku ganacsiga tihiin.
Balse waxaa muhiim ah in aad samaysid farsamo dheeraad ah oo aad ku qasbankarti macaamiishaada.
2.Wax ka badal qiimaha suuqa .
Marwalbo waxaa loo baahanyahay in aad wax ka badashid qiimaha aad wax uga iibisid macaamiishaada waayo sax ma ahan in aad ku iibisid waxsoosaarkaada qiimo xadidan oo aan la dhaafi karin waxaa muhiim ah in aad la jaanqaadid macaamiishaada iyo dhaqaalaha wadanka ka jiro.
3.Adkey wax soo saarkaada si aysan ugu dhicin macaamiishaada kalsooni daro uga dhicin.
Mar hadii aad ku jirtid tartan ganacsi waxaa muhiim ah in aad adkeyso waxsoosaarkaada waayo hadii aad soosaartid shey aan tayo lahayn wxaa hubaal ah in aad ku weyndoontid macaamiil fara badan marka waxaa muhiim in aad soo saartid shey tayo leh.
4.Ugu iibi macaamiishaada qiimo raali geliya
Mar hadii aad ganacsi ku jirtid waxaa aad u adegeyso waa bulshada aad markaas ku dhex nooshahay waxaana lagama maarmaan ah in aad ku qancisid qaabka aad wax uga iibineyso iyo in ay isku qalmaan sheyga aad ka iibisay iyo lacagta aad ka qaaday waa in ay isku qalmaan wana taa mida saxda ah.
Ahmed Awale liked a post in a topic by wanleweyn in Sideen Market Competitor ka ugu adkaan karaa 25 Oct 2016
faysal mehra mohabi liked a post in a topic by wanleweyn in Mashaakilka nafsiyadeed iyo mida bulshada Qeebta 2 aad 24 Oct 2016
Qeebta xigta Wuuxuu arkay laba gabdhood wuuna la hadlay laakin nasiib ma ahaanin in uu yiraahdo danbigayga adiga ayuu dushaada yahay,hadii hadalka la fasiro waxaaweeye macsiyo ayaa samaynaayaa,hadii aan sameeyo masciyadaas adiga ayaa danbiga dushaada ah.
Anigoo u qasdaynindanbiga danbiga in uu keenay guurka aan ka daahay iyo cimrigayga aan dayacay adiga dartaada.
Kadib waxaa meesha ka bilaabmay in laysku eego indho jeceel,isla markaana la tago meelaha lagu daawado aflaamta xun xun,ayna badato isku raaxeysiga oo ah habeen iyo maalin,ilaa ay ka noqo xumaanta intaa la eg mid iska caadi ah.
Kadib waxaan go,aansaday buu yiri ninkaan dhalinyada ah in aan dib u bilaabo markale isticmaalka aalada internetka,waxaan ku arkay gabadh aan waa hore is naqiinay,waxaan bilaabay in aan la sheekeysto,waxay ila aheed ama an u malaynaayay in ay tahay xaas ama qof la qaba,waayo mudo 3sano ah wax cilaaqaad ama xiriir ma anan laheen,boostada ayay warqad ii soo dhigtay waxayna bilawday in ay I jeceshahay,kadibna waxay iga codsatay in aan kala xiriiro telefoonkeeda,waan diiday laakin way ku adkaysatay,waan sameeyay laakin shalaaytadeyda maxaan u sameeyay,macsiyadii wey waynaatay,jeceelka wuu igu sii weynaaday,maalin walbo waan la hadlaa.
Waxaan isku dayay in aan lahadlin,laakin waan awoodi waayay arinkaa laba sabab awgeed:
Tankoowaad:waxaan noqday qof iimaankiisa laciif noqday,oo wuxuu raba iska sheega.
Tan labaad:waxaan u qaaday dareen waali ku dhaw.
Waxaan ka dalbaday ama ka codsaday in ay I siisso numberka waalidkeeda laga helo si aan u doonto islamarkaana aan u guursado,waxaa soo jeedin mid ka mid qaraabada iga danbeysa,dabcan iyada oo la tixraacaayo qoyskeyga,laakin aniga waxaan ogahay in ay guul ka keeni doonaan ehelkayga,in ay soo diidi doonaan waa ay dhici kartaa,markiiaan u sheegay akhbaartii ,kadib waan qoomameeyay,waxaan dareemayin aysan dhici Karin,gaar ahaan markii ii soo muuqday qaab dhaqanka gabadha ma ahayn mid I cajab geliyey,waayo waxay soo wada sameeyeyen ayuu dib u go,day,waxaan ka dalbaday in ay ehelkeeda diidaan arinkaa,anigoo rabin in aan dhaawaco dareenkeeda.
Markale ayaa laysku arkay darniijadii la fadhiisan jiray,waxaan u sheegay in hooyadey ii soo bandhigtay in ay ii guuriso gabar aan laheen tilmaamaha aan rabo aysan lahayn,waana ka diiday arinkaa.
Kadib waxaan ka dalbaday hooyadey in ay ii guuriso gabadhaan kusoo arkay masaajidka islmarkaana deris nala ah ,ahna mid diin iyo akhlaaq lehilaahay dartiisana ayaan u jeclahay.
Kadib hooyadey ayaa si dhaqsi ah igu tiri tan ayaan kuugu ogahay wiilkayga,laakin waxaa ogaaday in ay qabto cudur xun oo dhaxaltooyo ah,meelo kale ayaan fiirfiiriyay ,kadib waxaan qaatay go,aan ah in aan ku laabto darjiinadii aan fadhiisan jiray si aan halkaa uga helo gabar aan la, saaxibo,maxaayeelay kaligay ma noolaan kariyee,si aan u noolaado sida dhalinyarada ay u noolyihiin oo kale.
Waxaan soo gaaray goobtii ayagoo gabdho xun xun jooga oo ku sheekaysanaaya,sidoo kale isticmaalaaya shiishado,khamro,iyo sigaar,.aniga ma anan la daawanin ayaga aflaamta xun xun.
Hayeeshee waxan noqday mid isku daya in aan la wadaago waxa ay daawanaayaan gabdhahaan,waxaad moodaa in aan taagyeero u noqday koox,waxaan joogay halkaa waqti dheer anigoo waliba dareemaayo raaxo.mararka qaarna aan dareemaayo caajis.
Hase ahaatee waxaan isku dayaa in aysan I dareemin waalidkayga,hadii ay I weydiiyaana xagee jirtay waxaan noqonaa mid dareema xanaaq .
Waayo taasi caadi iima ahaaan jirin in aan kasoo dib dhaco guriga ,inkastoo nasiib daradeyda tan ugu weyn iyo tan ugu yar ay noqotay in aan caado ka dhigto qofka I weydiiya xagee aadaay ama xagee jirtay in aan xanaaqo.
Kadib waalidkayga wuu la qabsaday in aan imaado guriga waqti dambe.
Ugu dambeestii waalidkayga igama aysan dalbanin gabar qoys fiican kasoo jiida islmarkaana qurux leh,laakin kuwoo badan oo aan dabeecadooda aqaano ayaa jirta.hooyadey ayaan weydiiyay kawaran dabeecadeeda,aabahaa kuuguma waafaqsana,ee waxaan kuu doonaynaa islamrkaana kuu guurinaynaa ina adeertaada ee isku day in aad naga ogaatid,waan diiday waana is taagay amigo caraysan.
Maalinta xigta waxaa guriga yimid hooyadey walaasheed oo dhahaysa wiilkaaga gabadhayda ayaan u guurinaayaa hooyadii ayaa waxay ku tiri adigaba u sheeg waa kaa hortaada taagan.
Wuxuu yiri wiilkii maya ma iska soo xadeysaan gabadh aan waxba la weydiinin aanan la ogeyn inay diidayso iyo in kale,waxaa istaagtay hooyadii iyadoo dhahaysa waa xaq.waalidkii ayaa waxay ku dhaheen kasoo fakar.
Isla habeenkii waxaa geeriyootay hooyadey iyadoo dhici karatay hadii aan la imaado ra,yi kale in ay iga aqbali laheed.
Waxaa dhacday in aan ceebsado in aan soo hor istaago walaalahayga.
Mid ka mid ah ayaa tiri waa taa laheed maalin walbo hala ii guuriyo,waxaan ku iri kulama hadlaayo gabarey markaan mar aan aheyn,kuma faraxsani la hadalkaada,kadib markaan diiday waan istaagay kama aanan dalbanin in ay rabto in aan la hadlo waalideeda,sidoo kale kaalama hadli dooni maalin walbo mowduuc ku saabsan guurka.
Maxaad ku diideysaa in aad I guursatid?xitaa kibirka iska dhaaf?waxaan go,aasaday qofna in aan kala hadlin mowduuc ku saabsan guurka.
Maalinkaa kadib qofna kalama hadlin guur ma garan gabadhaan ma hooyadey aya ii hormarisay mise maya.
Laakin waxaan maqlay in ay ii raadinayso gabadha habaryarteyda,laakin waxaa dhici karto in aan diido marka la iisoo bandhigo.
Waalidkayga iguma caawinin in aan guursado ,mana igala hadli jirin ,waxaa galaayaa da,dayda afartanaad,walina waxaa I haysta mashaakilka ah guuur la,aanta,saaxiibadeyda wa ay raaxaysanaayaan,waan la fadhiistaa si aan waqtiga ugu soo dhameeyoo oo kaliya.
Ehelkeyga iyo qaraabadii ma dhex gali karo oo waan ceebsanaayaa,saaxiibadeyda midka kasto caruurtooda ayuu ku mashquulsanyahay habeenkii,xitaa saaxibkayga wanaagsanaa xaaskiisa ayuu la fadhiyaa,islamarkaana ku mashquulsan kumana sheegi karo dhibaatadeyda waayo waan la xishoonaayaa,
Waxaan ahay habeenkii qof hurda inkastoo hadana waxaan ahay qof aad u dareema daal badan,laba saac ka badan ma hurdi kari,waxaan caado ka dhigtay in aan seexdo xili danbe ,salaada subax wax yar ka hor,salaadiina sidaa igu dhaafto,anigoo hurdada ma caysanaayo,xiligaan ka kacay baan iskua dukaday kadib cabshadeyda ilaah baan u sheegtay
Kadib wuxuu qoray warqad uu kaga sheekeynaayo dhibaatooyiinka uu soo maray iyo saaxiibtanida xun dhibaatada ay leedahay
Ali Abdullahi Ahmed liked a post in a topic by wanleweyn in Habka ugu sahlan ee wax lagu xifdin Karo 12 Oct 2016
Aflixi Bar ama Baro liked a post in a topic by wanleweyn in Habka ugu sahlan ee wax lagu xifdin Karo 12 Oct 2016